होशियार ! थाहा पाउनुहोस् कस्ता व्यक्तिले खानुहुँदैन कागती
जनवरी 11, 2019 जनवरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment कागती
कागती एक प्रकारको रसिलो तथा अमिलो सदाबहार बहुउपयोगी र गुणकारी फल हो । कागती भिटामिन सी को महत्वपूर्ण स्रोत हो । सबै कागतीहरु सर्वगुणकारी हुने भएपनि कागजी कागतीलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । कागतीको जुसले छालालाई सुन्दर र कोमल पनि बनाउछ । कागतीमा रोगको संक्रमणबिरुद्ध लड्न सक्ने गुण हुन्छ । यसले सेता मान्छेमा रक्तकोष उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ र रगतलाइ संक्रमण हुनबाट पनि बचाउँछ । कागतीका फाइदाहरु र बेफाइदाहरु पनि छन् । यसले हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका साइडइफेक्टहरू पनि ल्याउन सक्दछ ।
कागती भनेको एकदमै अम्लीय तत्व हो, मतलब यसमा धेरै मात्रामा एसिड रहेको हुन्छ । त्यसकारण नै कसैकसैको लागि कागती विष सरह हुन जान्छ । अधिकांश छालाका समस्या जस्तै डण्डीफोरको दाग, कालो वा सेतो खीलको उपचार गर्नका लागि कागतीको प्रयोग गरिन्छ । तर, विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा के छ भने कागतीले हाम्रो छालामा पनि साइडइफेक्ट गर्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो अनुहारको दागधब्बा, कालो दाग अथवा डण्डीफोरको उपचारको लागि कागतीको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि निम्न कुराहरूमा सावधानी अपनाउनुपर्दछ ।
सुक्खा छालाको लागि– यदि तपाईँको अनुहारको छाला सुक्खा खालको (तेल ननिस्कने छाला) छ भने, अधिक कागतीको जुस प्रयोग गर्दा त्यसले अझ बढि सुक्खा र फुस्रो बनाउँदछ । त्यसैले कागतीलाई सीधै अनुहारमा पोत्नुभन्दा, त्यसको रसलाई मनतातो पानीसँग घुलाएर पातलो बनाई लगाउनुपर्दछ । डण्डीफोरको लागि– कागतीको जुसमा हुने अधिक एसिडले पाक्न लागेको डण्डीफोरलाई झन् असर गरी रगत निकाल्ने अथवा जलन गराउन सक्छ । कालो छालाको लागि– यदि तपाईँको छाला कालोवर्णको छ भने डण्डीफोर तथा अन्य उपचारको लागि कागती प्रयोग नगर्दै उचित हुन्छ किनभने कागतीमा भएको एसिडले छालालाई जलाएर अझ कालो बनाउन सक्दछ ।
कागती, निबुवा, भोगटे जस्ता अम्लीय खानेकुराहरूको अधिक सेवनले दाँत र बलियो एसिडको व्यापक सम्पर्क हुने गर्छ। यसले दाँतलाई सुरक्षा गर्ने इनामेललाई खियाई दाँतलाई संवेदनशील बनाउँदछ, विशेष गरी तातो र चिसो खानेकुराको लागि। धेरै अमिलो खानेकुरा खाँदा दाँत कुडिन्छ, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र दाँत कुडिएको बेला चिसो वा तातो पदार्थ खाँदा दाँत सिरिङ्ग बनाउँछ- यो पनि सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो।त्यसैले कागतीको सेवन गर्दा सीधै दाँतले टोक्ने अथवा चुस्ने गर्नुहुँदैन। कागतीको जुस पिउँदा पनि दाँतसँग सम्पर्क नगराउने गरी स्ट्र (Straw) को माध्यमबाट पिउनुपर्दछ।
छात्ती र पेटको बीच भागमा पोल्ने, रिँगटा लागेको जस्तो हुने, बान्ता हुन खोज्ने अनि भोक लागेको जस्तो महशुस हुने समस्या नै एसिडिटीका लक्षणहरू हुन्। धेरै चिल्लो, पीरो र अमिलो खानेकुराको सेवनले एसिडिटी बढाउँदछ, जसमा कागती पनि पर्दछ। भोजननलीमा पेटको एसिडले जलन गरिरहेको बेला कागती सेवन गर्दा त्यसले अझ बढि पोल्दछ र अवस्थालाई गम्भीर बनाउँदछ। यदि तपाईँलाई अल्सर छ भने पनि कागती नखान हामी तपाईँलाई सल्लाह दिन्छौँ। कागती मात्रै होइन, अन्य अमिलो, पीरो र चिल्लो खानेकुरा पनि बार्नुपर्दछ ।
४. पेटको गडबडी हुन
खानेकुरा पचाउन गाह्रो भैरहेको बेला कहिलेकाहिँ थोरै कागतीको सेवनले पचाउन सजिलो पर्दछ । तर यदि कागतीको मात्रा बढि भएमा त्यसको असर ठ्याक्कै उल्टो हुन जान्छ । यसले पेटको भित्री भित्तामा रहेका रक्षात्मक कोषमा क्षय पुर्याउँदछ, जसको कारण एसिडिटी, ग्यास्ट्रिक जस्ता समस्या पैदा गराउन सक्दछ। त्यसैले यदि कागतीको सेवन गर्नैपरेमा, सुरुमा थोरै मात्रामा खानुहोस् । १ गिलास पानीमा २/३ थोपा कागतीको रस मिसाएर पिउँदा उत्तम हुन्छ ।
कागती जस्ता अन्य अमिलो खानेकुरामा नाप्न सकिने मात्रामा अक्जालेट (Oxalate) पाउन सकिन्छ । यो बोटबिरुवा, जनावर तथा मानवशरीरमा पाइने प्राकृतिक तत्व हो । जब हाम्रो शरीरमा अक्जालेटको मात्रा बढि हुन थाल्छ, तब त्यो थिग्रिएर पत्थरमा परिणत हुन थाल्छ र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गराउन सक्दछ । त्यसैले पहिल्यै देखि मृगौला तथा पित्तथैलीको समस्या भएका व्यक्तिहरूले कागती तथा अन्य अमिलो पदार्थको सेवन गर्नु हानिकारक हुन्छ ।
कागतीमा प्रशस्तै भिटामिन-सी हुन्छ, जुन ‘एस्कर्बिक एसिड’ (Ascorbic acid) को रूपमा पाउन सकिन्छ । यो एसिडको एउटा विशेषता के हो भन्दा, यसले मृगौलाको काम गर्न प्रक्रियालाई छिटो गराउँदछ र पिसाबको उत्पादनमा वृद्धि गराउँदछ, जसको कारण हाम्रो शरीरबाट छिटोभन्दा छिटो पानीको मात्रा घट्दै जान्छ र निर्जलीकरण हुने समस्या देखा पर्न सक्दछ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कागती पानीका फाइदाहरु
← शुरू हुदैछ कलियुगको प्रभाव नेपालबाट
जनमत सर्वेक्षण – पृथ्वी जयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मान्नुपर्छ भन्ने बहसमा तपाईको धारणा के छ ? →
डिसेम्बर 9, 2018 डिसेम्बर 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक 8
डिसेम्बर 2, 2019 डिसेम्बर 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
One thought on “होशियार ! कस्ता व्यक्तिले खानुहुँदैन कागती”